Musharrax Madaxweyne Cali Xaaji Warsame oo booqday goobo muhiim ah Magaladda Bosaso(Sawirro). • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Musharrax Madaxweyne Cali Xaaji Warsame oo booqday goobo muhiim ah Magaladda Bosaso(Sawirro).
Musharrax Madaxweyne Cali Xaaji Warsame oo booqday goobo muhiim ah Magaladda Bosaso(Sawirro).
December 5, 2018 - By: Mohamed Dahir
Garowe (HM):- Musharrax Madaxweyne Cali Xaaji warsame ayaa kusugan magaaladda Ganacasiga Puntland ee Boosaaso,waxaana uu kormeeray goobaha muhiim ah ee magaaladda sida Isbitaalka Guud,Maxjarka xoolaha lagu nasiyo & rugta ganacsiga Puntland xarunteeda Boosaaso.
Musharaxu waxaa uu kulamo la qaatay masuuliyiinta iyo howlwadeenada goobahan oo uu kala sheekaystay sida ay u socdaan shaqooyinka ay bulshada u ahayaan,waxaana uu darsay caqabadaha iyo baahiyaha ka jira sida Isbitaalka iyo Maxjarka xoolaha lagu nasiyo.
Cali Xaaji warsame waxaa uu dhamaan meelaha uu booqday ku dhiirigeliyey in ay u dhabar adaygaan marxalada ay kushaqeeyaan,iyadoo cid kasta ay hayso masuuliyad baxadleh,waxaa uu xusay in hadii uu ku guulaysto xilka Madaxweynaha doorashada 2019ka uu wax kaqabandoono meelaha bulshada looga adeego guud ahaan.
Musharaxu waxaa uu hoygiisa ku booqday Beeldaaje Ismaciil Beeldaaje Yaasiin oo kamid ah saladiinta dhaqanka Puntland ee kusagan gudaha magalaada Bosaaso ee xarunta Gobolka Bari,iyadoo beeldaajuhu uga mahadceliyey siyarada uu ugu yimi musharuxu.
Musharax Cali Xaaaji Warsame oo horey Puntland uga soo noqday Wasiirka waxbaarashadda & Tacliinta sare ee Puntland ayaa u tagan xilka Madaxweynenimada dowladda Puntland doorashadda lagu wado in ay dhacdo 1th bisha Diseenbar 2019ka.